Amajikijolo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Izindlela zokuvuna ama-blueberries: yini engenziwa ngamajikijolo awusizo ebusika
Ama-blueberries angenye yezinto ezithandwa kakhulu emhlabeni. Iqukethe amavithamini amaningi kanye nama-antioxidants. Ngokuvamile zijwayele ukuthuthukisa umbono, ukunciphisa i-cholesterol egazini, nokunciphisa amathuba okutheleleka kwamagciwane. Kuyaziwa ukuthi eziningi izimfanelo ezinhle zihlala ngisho nangemva kokushisa, ngakho-ke abantu abaningi benza ama-bilberries ebusika ekhaya.
Indlela yokumisa i-rosehip ekhaya ukuze ugcine usizo lwayo
Mayelana nezakhiwo zokuphulukisa ze rose zasendle zazizikhathi zasendulo. Futhi ngezinhloso zokwelapha azisebenzisi amajikijolo kuphela, kodwa futhi izimpande, amaqabunga, izimbali. Emzimbeni osemthethweni, lezi zitshalo ezinameva zibhekwa njengezitshalo ze-multivitamine ezinomsoco, olwa-antibacterial, diuretic, i-hemostatic kanye nokulawula umsebenzi wepheshana lomzimba.
Ukusetshenziswa kwe-hawthorn: izinzuzo nokulimaza umzimba
Njalo entwasahlobo, abantu bayamhlonipha amahlumela we-hawthorn, kepha abaningi abazi ngezinto zokuphulukisa. Phakathi naleso sikhathi, ama-phytotherapists enza ukwelashwa ngezithelo nezimbali zesitshalo se-neurosis, isifo sokuqina kwesifo sofuba, izifo zenhliziyo kanye nezifo ezibangelwa yi-climacteric. Kulesi sihloko sizokwethula izimpawu zezimbali nezithelo ze-hawthorn, sikutshele ngempahla yazo ewusizo, yokuphulukisa nokuphikisana.
Izinhlobonhlobo ezinhle zengadini ezihlaza okwesibhakabhaka ezide
Eminyakeni embalwa edlule, ama-blueberries asiyeke ukuhlanganiswa nezindleko eziphakeme zamajikijolo nokubunzima kokukhulela ensimini. Kunolwazi oluthe xaxa ngalolu berry oluyisimangaliso, futhi cishe wonke umuntu onsimu angazama isandla sakhe ekukhuleni. Ake sithole ukuthi yiziphi izinhlobo zezintambo ezihlaza okwesibhakabhaka eziphakeme ezibhekwa njengento engcono kakhulu.
Indlela ukupheka lingonberry jamu: zokupheka elula futhi nenhle nge izithombe
Ama-lingonberries awawona amajikijolo athandwa kakhulu, njengezithelo zama-raspberries noma ezinye izitshalo ze-dacha, kodwa ngesikhathi esifanayo inezakhiwo eziningi eziwusizo, ngenxa yokuthi i-jam kusuka kuyo iye yathandwa kakhulu namuhla. Ake sibheke ezinye zezinto ezithakazelisayo kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo zokupheka ezilula zokulondoloza izithelo ze-lingonberry.
I-Lingonberry isiraphu ebusika: iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo ngezithombe
I-Lingonberry, noma, njengalokho okhokho bethu babibiza, imithi yokungafi, yayithandwa abaningi ngenxa yephunga elimnandi elimnandi, ukunambitheka okumnandi kanye nezinto eziningi zokuphulukisa. Iziphuzo ezihlukahlukene zezithelo, ama-sauces, amakhemikhali, amakhemikhali e-lingonberry ahlala endaweni ehloniphekile ekudleni kwabantu abanakekela impilo yabo futhi bafisa ukuhlala bebancane futhi benamandla iminyaka eminingi.
Indlela yokupheka i-nightshade jam: iresiphi
Sekuyisikhathi eside abantu bebazi ngezakhiwo zokwelapha nezomsoco we-nightshade omnyama futhi bafunde ukuthi bangasebenzisa kanjani izitshalo zalo zokutshala nezithelo emithi yokwelapha, kanye nokwenza ama-sauces, ukulondoloza, ukujamu kanye nokugcwaliswa kokubhaka amajikijolo. Kulesi sihloko sizochaza indlela yokwenza i-jam kulezi zithelo, kanye nezinzuzo zayo zomzimba.